काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिदेखि ‘मर्निङ वाक’ निस्कन नपाइने, के के गर्न पाइदैन ? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिदेखि ‘मर्निङ वाक’ निस्कन नपाइने, के के गर्न पाइदैन ?
काठमाडौँ- काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईँ बिहिबारदेखि मर्निङ वाक या अरु कुनै अत्यावश्यक नभएको काममा निस्कँदै हुनुहुन्छ ? एकै छिन त हो, त्यहीँ पर पुगेर आईहाल्छु नि भन्ने सोचमा निस्कने सोच बनाउनुभएको छ ? यदी त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँ कारवाहीमा पर्न सक्नुहुन्छ ।
अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने । मुल्यवृद्धि गर्ने, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा सहज आपूर्तिमा अबरोध गर्नेहरु उपर कडा कारवाही गरिने छ । आदेश उल्लंघन गरे कडा कारवाही हुने चेतावनी दिइएको छ ।रासस
अन्ततः फेरि लकडाउन गर्ने, आज बसेको बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय !